कर्मचारीले दलको सदस्यता लिए सिधै बर्खास्त ! - Everest Dainik - News from Nepal
कर्मचारीले दलको सदस्यता लिए सिधै बर्खास्त !
काठमाडौं, माघ २६ । राजनीतिक दल वा तिनका संगठनमा सदस्य बन्ने निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने भएको छ । सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले माग पूरा गराउन हडताल र काम बन्द गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
याे पनि पढ्नुस पूरा भयो कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया, अपुगको चाँडै विज्ञापन खुलाइने
याे पनि पढ्नुस कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष !
निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने र त्यसैमार्फत सरकारसँग संवाद र सहमति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै समूहले माग राख्न नपाउने र आधिकारिक युनियनमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने उल्लेख छ । युनियनको निर्वाचन हरेक तीन वर्षमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । युनियनका पदाधिकारी र सदस्य रहेका कर्मचारी पदीय जिम्मेवारीबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै पनि कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारीबमोजिमको कामबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा अखिल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन अध्यक्षसहित १६ जना पक्राउ